Under-Display Selfie Camera, Virtual Buttons တွေနဲ့ ဖုန်းအသစ်တွေကို မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ Huawei • TECH CORNER
Under-Display Selfie Camera, Virtual Buttons တွေနဲ့ ဖုန်းအသစ်တွေကို မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ Huawei
Huawei အနေနဲ့ Under-Display Selfie Camera နဲ့ Virtual Buttons တွေ ပါဝင်တဲ့ Smartphone အသစ် ၂ လုံးကို CNIPA (China National Intellectual Property Administration) မှာ မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ World Intellectual Property Office ရဲ့ database မှာလဲ ပါဝင်နေပြီး အဆိုပါ ဖုန်းအသစ်တွေရဲ့ Patent Design တွေကိုလဲ စတင်တွေ့မြင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Image via LET’SGODIGITAL
ပထမ Model ရဲ့ ဒီဇိုင်းက အရှေ့ဘက်မှာ မျက်နှာပြင်အပြည့်၊ ဘေးဘောင်တွေ လုံးဝ ပါးလွှာနေတာကို တွေ့ရပြီး popup mechanism တွေ၊ Punch-Hole တွေ မပါတဲ့ Full View Display ဖြစ်ပါတယ်။ ‌ပြီးတော့ အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင် Display ဆီကနေ ဘေးဘက်တွေကို curved ထားတဲ့ နေရာနှစ်ခုကိုလဲ တွေ့ရပြီး Power Button, Volume Rockers တွေအတွက် Virtual Buttons တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Model တစ်ခုရဲ့ ဒီဇိုင်းက အပေါ်က ဖုန်းနဲ့ အကုန်နီးပါးဆင်တူနေပြီး မတူတာက ဘေးဘက်ကို curved ထားတဲ့ နေရာတွေက နောက်ကျောဘက် Body အထိ ရောက်နေတာပါ။
အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ မူပိုင်ခွင့် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Huawei ဘက်ကနေတော့ ဖုန်း‌မော်ဒယ် တစ်ခုခုကို အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
နောက်ပြီးတော့ ဒါဟာ မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတာဖြစ်လို့ ဘယ်အချိန်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာလဲ အတိအကျမသိရသေးပါ။ (သတင်းကိုသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ဆိုတော့ ဘာပဲပြောပြော Vivo ‌ကလဲ Apex 2020 နဲ့ အတူ Under-Display Selfie Camera ကို Concept အနေနဲ့ ချပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ Huawei တို့၊ Xiaomi တို့၊ Oppo တို့လဲ UD Selfie Camera တွေကို စမ်းသပ်နေကြမှာပါ။ လက်ရှိအချိန်ထိတော့ Concept Device တစ်ခုအနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ Retail Device တစ်ခုအနေနဲ့ Consumers တွေလက်ထဲကို အရောက်ပို့ပေးနိုင်မဲ့ UD Selfie camera ဖုန်းတွေ ထွက်ရှိမလာသေးပါဘူး။
မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြစ်အောင် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ Huawei ကများ ပထမဆုံး UD Selfie Camera ပါဝင်တဲ့ Smartphone တစ်လုံးကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ပထမဆုံး စတင်ရောင်းချနိုင်မှာလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Source: Let’sGoDigital | Featured Image is Mate 30 Pro RS Porsche Design credit to PocketNow
HuaweiRumorsUnder-Display Selfie Camera
120Hz, 60x zoom, SD 855+ တွေပါဝင်တဲ့ realme X3 Superzoom နဲ့ realme X3 တို့ ထွက်ရှိလာ
Share via:0Shares0ပြီးခဲ့တဲ့လက realme အနေနဲ့ realme X3 SuperZoom ဖုန်းအသစ်ကို European ဈေးကွက်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်
iOS 14 ၏ Features အသစ်များနှင့် Update ရရှိနိုင်မည့် Devices များ
Share via:0Shares0မနေ့ညက Apple ရဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ WWDC Event မှာ iOS 13 ရဲ့
June 24 ရက်နေ့ China မှာ တရားဝင်စတင်ရောင်းချတော့မယ့် Redmi9series
Share via:0Shares0Xiaomi အနေနဲ့ Redmi Note9series ရဲ့ တစ်ဆင့်နိမ့်တယ်လို့ပြောရမဲ့ Redmi 9
Samsung Galaxy A31 နှင့် Galaxy A11 စမတ်ဖုန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်မိတ်ဆက်
Share via:0Shares0Samsung Myanmar ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Samsung ထဲကပဲ ရွေးချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာ ၄သိန်းတန်
Why do we buy expensive iPhone? (33,178)
iPhone X vs iPhone 11 Pro Should You Upgrade (25,782)
An App that can access MIUI Hidden setting (19,996)
What is HTC Doing Now? (16,910)
AMOLED Display နှင့် LCD Display တို့၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ (16,695)
iPhone တစ်လုံးကို ပြုလုပ်ဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ? (15,997)